ယဉ်ကျေးမှုမြို့တော်ပုဂံမြို့ပေါ်ရှိဘုရားများ၌ တရားအားထုတ်ခြင်း | Dr Chit Nge (Philosophy) Ph.D, London
← အလိုတော်ပြည့်ဘုရား၌ဒုတိယအကြိမ် တရားအားထုတ်ခြင်း
စာရေးသူတို့သည် ပုဂံမြို့ပေါ်၌ တရားအားထုတ်ခဲ့ကြသည်မှာ စေတီ တော်တော်များလာသည်၊ အားထုတ်သည့် အချိန်ပေါင်းလည်း များလာသည်၊ ထို့ကြောင့် သမာဓိများလည်း ရသည်ထက် ရလာသည်။ အရာရာသည် (Practice makes perfect.) ဆိုသကဲ့သို့ ကျွမ်းကျင်ရာ လိမ္မာကြသည် မဟုတ်ပါလော။ လေ့ကျင့်လျှင် တိုးတက် ဖြစ်ထွန်းသည်သာ ဖြစ်သည်။ လူတိုင်းသည် ကိုယ်သန်ရာ ကိုယ် လေ့ကျင့်ကြသည်။
စာရေးသူသည် တရားအားထုတ်ခြင်းကို လေ့ကျင့်ရာ တရားအားထုတ်ခြင်း၌ အတွေ့အကြုံ များလာသည်။ နှစ်ပေါင်း (၄၀) ၀န်းကျင် တစ်နေ့မှ မပျက်မကွက် တရားအားထုတ်ခဲ့သည်။ ဤစံချိန်ကိုတော့ စာရေးသူသည် ထိန်းသိမ်းထားသည် မည်သည့်နေ့ မည်သည့်အကြောင်းကြောင့် တရားအားထုတ်ဖြစ်ဖြင်း ပျက်ကွက်သွားသည် ဟူ၍ မရှိခဲ့ဖူးချေ။ နေ့တိုင်း တရားအားထုတ်သည်။
ယခုအခါ ပုဂံမြို့ပေါ်ရှိ ဘုရားများ၌ နောက်ပိုင်း ညပိုင်းတွင် အားထုတ်သည်။ အားထုတ်ရင်း အားထုတ်ရင်း အားထုတ်၍ ကောင်းလာသည်။ တရားတော်၌ တရား၏ အရသာ ရှိသည်ဆိုသည်မှာ ကိုယ်တွေ့ ခံစားရသည်။
တစ်ချို့က တရားအားထုတ်သည့် အရသာကို အပြစ်တင်လိုကြသည်။ ယင်းပုဂ္ဂိုလ်များသည် တရား အားမထုတ်ဖူးသောကြောင့် ဖြစ်သည်၊ နားလည်မှု မရှိသောကြောင့် ဖြစ်သည်။ အမှန်မှာ အာရုံခြောက်ပါး တံခါးခြောက်ပေါက်နှင့် အာရုံခံစားခြင်း အရသာမျိုး မဟုတ်ချေ။ တရား၏အရသာသည် ထိုအာရုံခြောက်ပါးမှ ရသော အရသာတို့ထက် ပိုမိုကောင်းမွန်လေသည်။ သီလ၊ သမာဓိ၊ ပညာများလည်း တိုးတက်သည်။ လေ့ကျင့်လျှင် တိုးတက်ကြသည်၊ စွမ်းဆောင်ကြသည်။
မှန်သည်ကို မှန်သည့်အကြောင်း ပြောသဖြင့် ယောဂီများ အားရှိစေနိုင်သည်။ ထို့ကြောင့် မှန်ရာကန်ရာကို တင်ပြခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ ကိုယ်တိုင်လည်း တရားအားထုတ်သည်။ မိမိသည် အချိန်အခါမရွေး သော်လည်းကောင်း၊ နေရာမရွေး သော်လည်းကောင်း အားထုတ်နိုင်သော အဆင့်၌ ရောက်ပြီဟု ယူဆရသည်။ အားထုတ်ရခြင်း၌ ကိုယ်တိုင် နှစ်ခြိုက်သည်။ အားထုတ်ရခြင်းကို သဘောကျသည်၊ အားထုတ်ခြင့်ဖြင့် ရရှိသော ငြိမ်းအေးမှု၊ တည်ငြိမ်မှု၊ ရှင်းသန့်မှု၊ ကြည်လင်မှုများအား မိမိတန်ဖိုးထားသည်။ ယင်းမှာ မိမိ၏ တန်ဖိုးထားချက်ပင် ဖြစ်သည်။
မိမိသည် တရားအားထုတ်လိုက်သည်နှင့် တပြိုင်နက်တည်း ဟဒယများ ရှင်းသန့်တည်ငြိမ်ကာ သမာဓိများ တိုးတက်၍ အစစအရာရာ တည်တည်ငြိမ်ငြိမ် နှိုင်းနှိုင်းချိန်ချိန် ဖြစ်လာသည်။ ထို့ကြောင့် သဘောကျသည်။ တရားအားထုတ်ခြင်းသည် မိမိအတွက်တော့မူ လွန်စွာ နှစ်ခြိုက်စရာကောင်းသော လေ့ကျင့်ခန်းတစ်ခု ဖြစ်နေသည်။
ထို့အပြင် ဤပုဂံမြို့ ယဉ်ကျေးမှုဌာန မြတ်စွာဘုရား၏ သာသနာ့ အမွေအနှစ်တည်ရာ ဂူကျောင်းဘုရား စေတီပုထိုးများ မြောက်များစွာရှိသော ဌာန၌ အားထုတ်ရသဖြင့် ပို၍ အားတက် သကဲ့သို့လည်း ရှိသည်။ ပို၍ ဓမ္မရသကို မိမိအနေနှင့် မိသည်ဟု ဆိုရပေလိမ့်မည်။
ယခုအခါ မိမိသည် အားအင် လွန်စွာကောင်းရာ ဆက်လက်၍ အားထုတ်တော့မည်သာ ဖြစ်သည်။ ဘုရားတစ်ဆူပြီး တစ်ဆူ အားထုတ်လာရာ စေတီတော် တော်တော်များများ၌ အားထုတ်ခဲ့သည်။ ဆက်လက်၍လည်း အားထုတ်ဦးမည်။
မိမိသည် ပဋိပတ္တိနှင့် ပူဇော်သကဲ့သို့ရှိသည်ဟု ကိုယ့်ကိုယ်ကို အောက်မေ့သည်။ မြတ်စွာဘုရား၏ သာသနာတော်၌ ကိုယ်တိုင်ကျင့်၍ ပူဇော်ခြင်းသည် ကောင်းလေသည်။ ထို့အပြင် ဤကဲ့သို့သော ဘာသာ သာသနာ ထွန်းကားရာ မြတ်စွာဘုရား၏ သာသနာ အထိမ်းအမှတ်ရှိရာ ဤပုဂံမြို့၌ တရားအားထုတ် ခြင်းသည် အထူးပင် နှစ်ခြိုက်ဖွယ်ရာကောင်း၍ အင်အား ပြည့်ဖြိုးစေသော သဘောများ ကိန်းဝပ် ခံစားရ သည်။
ထို့နောက် ရှေးမင်းကောင်းမင်းမြတ်များသည် ဘုန်းကံကြီးမားလိုလျှင် ဘာသာ သာသနာကို ဂရုတစိုက် ပံ့ပိုးဆောင်ရွက်ကြောင်း မှတ်တမ်းများ ရှိသည်ဖြစ်ရာ သာသနာကို ပံ့ပိုးခြင်းသည် မိမိ၏ ဘုန်းကံ တိုးတက်စေသော သဘောရှိသည်ကို မိမိကိုယ်တွေ့ ယုံကြည်မိပါကြောင်း မှတ်တမ်းအဖြစ် ရေးသား ဖော်ပြပါသည်။
Tags: Buddhism, Myanmar Posts, ပဋိပတ္တိ, မြတ်စွာဘုရား
This entry was posted in Buddhism and tagged Buddhism, Myanmar Posts, ပဋိပတ္တိ, မြတ်စွာဘုရား. Bookmark the permalink.